आफ्नै भिनाजुले गरे ढुङ्गाले थिचेर निर्मम हत्या ! (भिडियो)
माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नं. ७ धम्पुसमा मनकाजी बि.क को हत्या भएको छ । हत्या अभियोगमा उनकै भिनाजु सन्त बि.क लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रक्सी पिएर सन्तले मनकाजीलाई ढुङ्गाले थिचेर बाटोमै हत्या गरेको स्थानिय र आफन्तले बताएका छन । ढुङ्गाले थिच्दै गरेको देखेका स्थानियलाई समेत आरोपी सन्तले मारीदिने भन्दै धम्की दिएको प्रतक्षदर्शी बताउछन ।
प्रहरी भर्खरै घटनास्थलबाट फर्केको छ । गण्डकी टेलिभिजनका लागी अपिल त्रिपाठीले घटनास्थलमा नै पुगेर स्थलगत रिपोटीङ गरेका छन । घटनाको सम्पुर्ण नालिबेली सहीत प्रतक्षदर्शीको बयान तलको भिडियोमा हेनुृहोस :
* डिप्रेसन के हो ?, कसरी हुन्छ यसको उपचार ?
सोच्न थाल्छौं । जब यो चरम अवस्थामा पुग्छ, मानिसलाई आफ्नो जीन्दगी बेकार लाग्न थाल्छ र बिस्तारै विस्तारै मानिस डिप्रेसनको स्थितिमा पुग्छ । चिन्ता र तनावका कारण शरीरमा कति हार्मोन्सको तह बढ्छ, जसमा एडि्रनलीन र कार्टिसोल प्रमुख छन् । लगातार तनाव र चिन्ताको स्थिति बिस्तारै डिप्रेसनमा परिणत हुन्छ ।
* डिप्रेसनको उपचार